ပီအာ (PR) ဆိုသည်မှာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » ပီအာ (PR) ဆိုသည်မှာ
ပီအာ (PR) ဆိုသည်မှာ
Posted by kogyi mind on Jul 27, 2014 in 2010/2012/2015 Election, Politics, Issues | 13 comments
အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ် Proportional Representation (PR) အကြောင်းကို ချက်ဘောက်မှာ လာမေးကြတဲ့ သူတွေရှိပါတယ်၊ အခြေခံဥပဒေအကြောင်းကို ရေးခဲ့ဖူးတာအကြောင်းပြုပြီး ပီအာ အကြောင်းလည်းရေးဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်၊
ကြိုတင်ပြောလိုသည်မှာ မိမိသည် ဥပဒေပညာရှင်မဟုတ်ပါ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အရေးကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သာမာန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရတွေမပါပဲ လိုတိုရှင်းသဘောလောက်ရေးသားပါ့မယ်။ ကောင်းတယ်၊ ဆိုးတယ်မပြောလိုပဲ ဖတ်သူများအနေဖြင့်စဉ်းစားရန်သာဖြစ်ပါတယ်။
ပီအာကျင့်သုံးလိုသူများကိုလေ့လာကြည့်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အုပ်စုနှစ်ခုသာရှိပါတယ်၊ အဲဒါကတော့
၁) စစ်တပ် ၂၅% အင်အားဖြင့် ထာဝရတည်ရှိနေနိုင်မည့် လက်ရှိအာဏာရပါတီ
အုပ်စုနှစ်ခုစလုံး ပီအာ စနစ်ကျင့်သုံးလိုသော်လည်း ရည်ရွယ်ချက်ခြင်း မတူကြပါ။
ကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့စနစ်ကို First-past-the-post voting – FPTP (ပြည်သူရွေးချယ်သည့်ကိုယ်စားလှယ်ကို မဲအများဆုံးဖြင့်ရွေးချယ်သည့်စနစ်) လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဆိုလိုသည်မှာ တစ်မဲ၊ နှစ်မဲအသာရရုံဖြင့် ထိုကိုယ်စားလှယ်အနိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး တစ်မဲ၊ နှစ်မဲ လျော့နည်းရုံဖြင့် ပြိုင်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်ရှုံးနိမ့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပီအာ အုပ်စုဟာ ထိုအချက်ကိုထောက်ပြပြီး ရှုံးနိမ်ခဲ့သည့် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ နစ်နာမှုကို ငဲ့ညှာသည့်အနေဖြင့် ထိုကိုယ်စားလှယ်ကိုပါ လွှတ်တော်တွင်နေရာပေးသင့်သည်ဟု ယူဆကြပါတယ်။
ရုတ်တရက်ကြည့်လျှင် အင်မတန်တရားမျှတပြီး ပြည်သူတို့၏ဆန္ဒကို အလွန်လေးစားသည့်လုပ်ရပ်ဟု ထင်ရသော်လည်း ထိုကဲ့သို့ပြည်သူအပေါ်တွင် မှန်ကန်သောစေတနာထားပါ၏လောဟု မေးခွန်းထုတ်စရာအများကြီးရှိနေပါတယ်။
လက်ရှိတွင်ပီအာစနစ်ကို တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ အနည်းငယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးသော်လည်ကောင်းကျင့်သုံးနေတဲ့ နိုင်ငံများဟာ သြစတြေးလျား၊ ဘရာဇီး၊ ထိုင်း၊ ဖင်လန်၊ အိန္ဒိယ၊ ကဗ္ဘောဒီးယား၊ နီပေါ အစရှိသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသားများနဲ့ဝေါဟာရ မစိမ်းတဲ့နိုင်ငံများအပါအ၀င် ၈၆ နိုင်ငံရှိနေပါတယ်။
ဒီအချက်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ပီအာမှာလည်းကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိကြောင်းကို ပဏာမနားလည်ပြီး ပီအာလက်ခံသူမှန်သမျှ လူယုတ်မာများသဖွယ်ကောက်ချက်ချခြင်းသည်လည်း အခြေအနေမှန်ကိုနားလည်ရန်အတွက် နည်းလမ်းမှန်မဟုတ်ကြောင်း အရင်လက်ခံထားစေချင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပီအာစနစ်ကို အလွန်ဆိုးရွားသောစနစ်ဟု ယူဆခြင်းထက် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးနှင့်သင့်တော်ခြင်းရှိမရှိ သုံးသပ်ခြင်းသာ သင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် တတ်သိနားလည်သော နိုင်ငံရေးသမားများကိုယ်တိုင်က ပီအာစနစ်ကိုမကောင်းဘူးဟုမပြောပဲ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်သင့်တော်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းမှတ်ချက်ပေးတာကို သတိပြုစေလိုပါတယ်။
ပီအာကျင့်သုံးသည့်နိုင်ငံများကိုလေ့လာကြည့်လျှင် ယေဘူယျအချက်အားဖြင့် တူညီနေကြသည်မှာ
၁) အားလုံးသည် ဒီမိုကရေစီအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ပြီးနေသားတကျဖြစ်နေခြင်း၊
၂) ပြည့်သူ့ဆန္ဒ ကိုအထိုက်အလျောက်လေးစားသည့်နိုင်ငံများဖြစ်ကြခြင်း၊
၄) ပါတီကြီးတစ်ခုက လွှတ်တော်ကိုအမြဲလက်ဝါးကြီးအုပ်မထားနိုင်ခြင်း၊
၅) ပြည်သူကလည်း လွှတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်း၊
၆) တရားမျှတသည့် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေရှိခြင်း၊
ထိုကဲ့သို့ ကျင့်သားရပြီးပါတီကြီးများက ပီအာ စနစ်ကိုကျင့်သုံးရခြင်းမှာလည်းအောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
၁) မဲရှုံးခဲ့သည့် ပြည်သူတွေကို အမှန်တကယ်ငဲ့ညှာခြင်း၊
၂) အင်အားကြီးပါတီကြီးများ ကြိုက်သလိုခြယ်လှယ်ခွင့်မရစေရန် ပါတီငယ်များဖြင့်ထောက်ကန်ထားခြင်း၊
၃) ပါတီတွေများလျှင် အဆိုနှင့်အတိုက်အခံများလာသည့်အတွက်ကြောင့် လွှတ်တော်အမတ်များအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်စေခြင်း၊
၄) မတူညီသည်ကိုဖယ်ပြီးတူသည့်အချက်ကို စုစည်းနိုင်ကာ နေရာလပ်မကျန် လွှတ်တော်အာဏာပြန့်နှံ့စေခြင်း၊
၅) လူကြိုက်နည်းသဖြင့် ပီအာ စနစ်ကြောင့်သာလွှတ်တော်ရောက်နေရသည့်ပါတီငယ်များအနေဖြင့် ချောင်ထိုးခြင်းမခံရပဲ နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်စေကာ ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုပိုမိုအလေးထားလာခြင်း၊
မြန်မာနိုင်ငံအနေနှင့်မူ ပီအာစနစ်ကျင့်သုံးလိုပါက လက်ရှိနိုင်ငံကြီးများ၏အနေအထားကို ရောက်နေဖို့တော့လိုပါသည်။
သို့သော်မြန်မာနိုင်ငံသည် ထိုနိုင်ငံများ၏အခြေအနေနှင့်ဖီလာအခြေအနေဖြစ်နေသဖြင့် ပီအာစနစ်၏ ရလာဒ်လည်းပြောင်းလဲလာနိုင်ပါသည်။
၄င်းတို့မှာရှေ့တွင်ပြောထားသည့် မတူညီသည့် အုပ်စုနှစ်ခုတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း
၁) ပါတီကြီးများက မိမိတို့သြဇာသက်ရောက်စေပြီး အသုံးချနိုင်သည့်ပါတီငယ်များကို အင်အားစုသဖွယ်မွေးမြူပြီး လိုသလိုအသုံးချနိုင်ခြင်း၊
၂) လူထုထောက်ခံမှုမရသောပါတီငယ်များကလည်း ပါတီကြီးကျောထောက်နောက်ခံဖြင့်အခွင့်အရေးလာဘ်လာဘကိုမြော်ကိုးပြီး လွှတ်တော်အတွင်း ဖျက်မြင်းလုပ်နိုင်ခြင်း၊
စသည်မတရားမှုများကို ခြေ၊ဥ အကာအကွယ်ယူကာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခွင့်ရှိနေပါလိမ့်မည်။
ထို့ပြင် စစ်တပ် ၂၅%နှုန်းကျောထောက်နောက်ခံယူထားသည့် အာဏာရပါတီကြီးသည် ပြိုင်ဘက်အတိုက်အခံပါတီများကြားတွင် ဖျက်မြင်းများသုံးကာ အင်အားကိုချိနဲ့စေပြီး အလွယ်တကူနှိမ်နင်းခွင့်လည်းရှိနေပါသည်။
ဒီမိုကရေစီပါးမ၀သေးသောပြည်သူလူထုအတွင်းတွင်လည်း မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုအတွင်းမှ ပြိုင်ဘက်အမတ်နှစ်ဦးစလုံးကို ကြောင်းပြုပြီးသွေးကွဲလာနိုင်စရာလည်းရှိပါသည်။
-နှစ်ပေါင်း ၄၀ အာဏာရှင်နှိက်စက်ခဲ့သောနိုင်ငံ၊
-ကျောင်းသင်ခန်းစာတွင် အမျိုးသားနေ့၊ -လွတ်လပ်ရေးနေ့နှင့် နိုင်ငံတော်သီချင်းအကြောင်းပယ်ဖျက်ခဲ့သောနိုင်ငံ၊
ထိုကဲ့သို့သောမြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတို့၏ဆန္ဒမဲများနှင့် ပြည်သူကို စေတနာထားလေးစားသောအားဖြင့် ပီအာ စနစ်ကိုကျင့်သုံးလိုသည်ဟု ပြောခြင်းသည်
မျက်နှာသနပ်ခါး၊ ပေါင်သေးစီးကြောင်းကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ရှက်စဖွယ်သာ ဖြစ်ချိမ့်မည်။
နောင်အနာဂါတ်ကာလတွင် ဆိုခဲ့ပြီးသောအခြေအနေများနှင့် ပြည့်စုံလာသောအခါမှ အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ် Proportional Representation (PR) ကိုကျင့်သုံးရန်စဉ်းစားသင့်ကြောင်း အကြံပေးလိုပါသည်။
သိပြီးသားလူတွေလည်း များပေမဲ့ ……
တစ်ချို့ မရေမရာသေးတဲ့ စာဖတ်သူတွေ အတွက် တင် ခိုင်းလိုက်တာပါ အကိုရေ။
PR က ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကာလမှာ သုံးဖို့ မသင့်သေးဘူး။ တနေ့ သုံးရမယ်ဆိုရင် … ဘယ်အချိန်ကို သုံးမှာလဲ .. ဆိုတာကို ပြောပါဆိုပြီး ထောက်မေးမယ့် လူတွေ ရှိနိုင်တာကြောင့် တစ်ခါတည်း ဖြေလိုက်ပါရစေ … ။
၁။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ “လွတ်လပ်” “မျှတ” တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်နဲ့ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို (အနည်းဆုံး) တကြိမ်လောက် ရွေးကောက်တင်မြှောက် အပြီး
၂။ သမ္မတ စနစ်ဆိုရင် သမ္မတကို သီးခြားရွေးကောက်အပြီး (ဒါမှမဟုတ်) ပါလီမန်စနစ်ဆို လက်ရှိ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာကို သမ္မတက မယူဘဲ ဝန်ကြီးချုပ်က အစိုးရဖွဲ့အပြီး
၃။ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု စနစ် စတင်အသက်ဝင်အပြီး
၄။ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာခုံရုံးက လွတ်လပ်မှု အပြည့်အဝ ရှိအပြီး
၅။ ပြည်သူလူထုကို ရွေးကောက်ပုံ စနစ်ဆိုင်ရာကို လုံလောက်တဲ့ ပညာပေးမှုတွေ လုပ်အပြီး
အဲဒီ အချက် ၅ ချက် ပြည့်စုံပြီးရင် PR ကို မြန်မာပြည်မှာ စတင်သုံးမယ်။
PR ဟာ အင်မတန် ကောင်းတဲ့ စနစ်ဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီကျကျ လူနည်းစုတွေရဲ့ အသံကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ပိုဆန်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ တနေ့ သုံးကို သုံးသင့်တယ်။
(PR ကို မသိလို့၊ နားမလည်လို့ … ခပ်ယောင်နန နဲ့ ကန့်ကွက်နေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ … အရင်ပြောချင်တယ်။)
ဒါပေမယ့် အခုကာလ ဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီတောင် မစသေးတဲ့ အာဏာရှင်ပုံပြောင်း ကာလမှာ … အာဏာရှင်တွေမတရား ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေတွေကို အကာအကွယ် ပေးနိုင်မယ့် PR စနစ်ကို မသုံးသင့်သေးတာ ဖြစ်တယ်။
PR ဟာ မီးနဲ့ တူတယ်။
သုံးတတ်ရင် လူအကို အင်မတန် အကျိုးဖြစ်စေပြီး … မသုံးတတ်ရင်တော့ တစ်အိမ်လုံး၊ တစ်လမ်းလုံး၊ တစ်ရပ်ကွက်လုံး၊ တစ်မြို့နယ်လုံးကို လောင်ကျွမ်း ဒုက္ခပေးနိုင်တယ် ဆိုတာ သိဖို့လိုပြီး …
..မြန်မာနိုင်ငံမှာ PR ကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း ကိုင်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားနဲ့ ပြည်သူ … ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိနေပြီလဲ … ။ အထူးသဖြင့် အခုကာလ .. မတရားတဲ့ အခြေခံ ဥပဒေအောက်မှာ PR ကြောင့် … ကောင်းကျိုးထက် … မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေကို ပြင်မရနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးပဲ ကျန်မယ်။
Buzz word လို့ ခေါ်တဲ့ … စကားလုံးကြီးကြီးတွေ လျှောက်ပြောပြီး နိုင်ငံရေး ယောင်နေတာဟာ အင်မတန် ကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ်။ ဥပမာ … အမျိုးသား နိုင်ငံရေးတို့၊ ပါတီနိုင်ငံရေးတို့ … စသဖြင့် BUZZ Words တွေကို တွင်တွင် သုံးလေ … အန္တရာယ်ပိုကြီးလေ ဖြစ်တယ်။
(Credit to Ko Htike)
ကျွန်မ စာတွေ ဖတ်ကြည့်ပေမဲ့ အဲဒီ အချိုးကျ ကိုယ်စားလှယ် ရွေးတဲ့ စနစ် ထဲ မှာ ကို ပုံစံ ပေါင်း များစွာ ထပ်ကွဲ နေတာ သိရပြီး ဖတ်ရင်း ချာချာလည် ပါတယ်။
ဒီတော့ ကိုယ့်ထက် နဲနဲ ပိုနားလည် မယ် ထင်တဲ့ သူကို မေးလဲ သူလဲ အကုန် ဘယ်လို သိပါ့မလဲ တဲ့။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ပီအာ သုံးတဲ့ နိုင်ငံခြင်း တူရင်တောင် အချိုးခွဲ တဲ့ ပုံစံ ကွဲ ကြတာမို့ လို့ ပြောပါတယ်။
နောက်ပြီး သူ က ပြန်မေးသေးတယ်။
မြန်မာပြည်က အခု လက်ရှိ မှာ ကို ၂၅% ဆိုတဲ့ အချိုးပါနေတာ ပီအာ ဘဲ မဟုတ်လားတဲ့။
မသိလို့မေးမှ သူက ပြန်ပြီး မေးခွန်းထုတ်တာ ခံရသေး။
နောက် သူသိတဲ့ ထိုင်း က ပီအာစနစ် ရဲ့ အချိုးချ ပုံ ကို ပြောပြပါတယ်။
အဲဒီ ပုံစံ က ပြည်သူက မဲ မပေးမှန်း သိတဲ့ လူ တွေ/ မဲမရနိုင်တဲ့ သူတွေ ကို လွှတ်တော်ထဲ သွင်းလို့ ရအောင် လုပ်ထား တဲ့ အချိုး ချ ပုံစံ ပါတဲ့။
သဘောကတော့ နိုက်ကလပ်ပိုင်ရှင် တွေ ဘိန်းရာဇာတွေ ကို ထည့်နိုင်ဖို့ သဘောပါတဲ့။
ဟုတ်မဟုတ် တော့ မသိ။
ဒီတော့ ကျွန်မ အထင်မှာတော့ ပီအာ စနစ် ဆိုတာ ကောင်းတာတွေ အများကြီးပါမှာသေချာပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူ့နောက်ကွယ်မှာ အချိုးချ တဲ့ ပုံစံ ကို ကြိုက်သလို လှည့်ပါတ်သုံးနိုင်တာမို့ အတော်လေး သတိထားမဲ့ ပုံစံ ရှိပါတယ်။
ဒါတွေက ဇာတ်ခုံနောက်မှာ ရှိတာမျိုး ထင်ရဲ့။
မြန်မာပြည်မှာ ဥပမာ ပြရရင်
စိတ်မနှံ့ သူ လက်ထဲ ကို ကျည်ဆံအပြည့် နဲ့ သေနတ် ပေးရဲ သလား ပါဘဲ။
အမှန်တော့ လဲ အဲသလို ဖြစ်နေပြီး သားပါလေ။
ကျည်ထပ်မဖြည့် ပေးတော့ ဘဲ သေနတ် ကို ပြန်သိမ်းနိုင်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ဘဲ ရှိပါတယ်။
တကဲ့ ဥမပါ က – သူခိုး လက်ထဲ ရွှေထုပ် ပေး မိသလို က ပိုပြီး သင့်တော်မယ်။ ;-))
အခု ၂၀၁၅ မှာ တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ NLD ကိုဘဲ လူကောင်း လူတော် ပေါင်းများစွာ က စိတ်စေတနာမှန် နဲ့ ပံ့ပိုး ကြဖို့ လိုတာပါ။
ဒီ တစ်နေရာထဲ မှာ ဘဲ မဲ တွေ ပုံနေဖို့ အရေးကြီးတာပါ။
ဒီလို အခြေအနေမှာမှ လူမညီရင်တော့ လဲ ရှိပါစေတော့။
လူတိုင်း က ကိုယ့်ခံယူချက် နဲ့ ကိုယ်ဘဲ မဟုတ်လား။
အရီး NLD က ၀င်ပြီးအရွေးခံရင် NLD ကို မဲပေးမယ် .. တကယ်ပြောတာ။
အခုထိတော့ အရင်တုန်းကကော .. နောက်ကော မဲသွားပေးဖို့ကို မစဉ်းစားသေးဘူး ..
ကိုယ့်ခံယူချက် နဲ့ ကိုယ် .. ။
မြန်မာပြည်ထဲ တကယ်တော်ပြီး စေတနာရှိ သူတွေ အများကြီး မထွက်ရဲ ကြတာပါ။
ဒါကြောင့် ကျွန်မ က အဝေး က ဟောင် ပေးနေတာလေ။
ကျွန်မ လဲ အခု မြန်မာပြည်ထဲ ရှိနေရင် ဒီလို တကယ်ဘဲ ဟောင်ရဲ မှာလား စဉ်းစားနေဆဲ။
ကဲ …. ဘယ်လောက် အားရှိဖို့ကောင်းလဲ။ :-))))
နိုင်ငံရေးကို..လေ့လာနေဆဲ..လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ …ဒီဆောင်းပါးမျိုးက…အဖိုးတန်ပါတယ်.. ။
.(လူအားလုံးရဲ့ ဆန္ဒတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ညှိယူနိုင်မယ့် အချိုးကျ ကိုယ်စားပြုစံနစ် ကို ကျင့်သုံးဖို့ဆိုရင်)
.အဲဒီလူတွေဟာ အတွေးအမြင်တွေသာ အသီးသီးကွဲပြားပေမယ့်
.ရည်ရွယ်ချက် တူညီ ဖို့လိုတယ်…။
.တိုင်းပြည်အကျိုး ပြည်သူအကျိုး သယ်ပိုးမယ် ။ တိုးတက်အောင်လုပ်မယ် …. ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မျိုး
.လူတိုင်း ကိုယ်စားလှယ်တိုင်း လူများစု ကိုယ်စားလှယ်အများစုမှာ တူညီရမယ်….။
.ကိုယ့်ကိုယ်ကို မညာပဲ စိတ်ထဲက ဖြေကြည့်မိတယ်……
.တိုင်းပြည်အကျိုး ပြည်သူအကျိုးကိုပဲ ဦးတည်လိုလားတဲ့
.မဲဆန္ဒရှင်များ၊ တိုင်းရင်းသားများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ နဲ့ နိုင်ငံရေးသမားများ
.ဒီနိုင်ငံမှာ ဘယ်လောက်များ ရှိမလဲလို့……….
.အဲဒီစံနစ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေအောင် ကြိုတင်ဖြည့်ဆည်းစရာတွေရှိပါတယ်…။
.အပြန်အလှန် လေးစားမှု့နဲ့ တရားမျှတမှု့ ကောင်းရမယ်
.တိုင်းပြည်ရဲ့ လက်ရှိ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တယားက ကောင်းရမယ်
.တိုင်းပြည်ရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ တရားဥပဒေ အစစ်အမှန်စိုးမိုးမှု့ ကောင်းရမယ်
.ကျုပ်တို့မှာ ကောင်းတာ ဘာရှိလို့လဲ……?
.ကောင်းတာတွေကို အခုမှ စပြီးပျိုးထောင်ရမှာ
.မျှော်လင့်နိုင်တာက အခုထက် နဲနဲ သက်သာမယ့် အခြေအနေပါ….
ဒီအခြေအနေမှာ အဲဒီအဖွဲ့ အားလျော့သွားမယ့် ဘယ်စံနစ်ကိုမှ အလိုမရှိ
( ဒီအခြေအနေမှာ အဲဒီအဖွဲ့ အားလျော့သွားမယ့် ဘယ်စံနစ်ကိုမှ အလိုမရှိ Credit to ဦးပါ )
ဒီအချိန်ထိ လူထုဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ရင်ထဲမှာရှိနေကြ တမ်းတနေကြတာ ဘာလို့လဲဆိုရင် သူ့နောက်က ဗိုလ်ချုပ်တွေ သူလောက် တိုင်းပြည်အပေါ်စေတနာမထားနိုင်ကြဘူး တိုင်းပြည်ကောင်းစားမယ်ဆို ကိုယ်ကျိုးမစွန့်နိုင် ကြလို့ပါဘဲ။ ဒါဆို အဲဒီဗိုလ်ချုပ်တွေနှင့်အတူယှဉ်ပြီး PR စနစ်နှင့် အစိုးရဖွဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီတိုင်းပြည် လက်ရှိအခြေအနေအရ ဘာတွေဖြစ်လာမှာလဲ အဲဒါ ကိုဘဲ အထပ်ထပ်စဉ်းစားနေစဲပါ ကိုကြီးမိုင်းရေ။
PR စနစ်က မကောင်းဘူးလို့မဆိုလိုဘူးနော် ဒီအခြေအနေ ဒီတိုင်းပြည်အတွက် မသင့်သေးဘူးထင်တာပါ။
ကျုပ်လည်း PR စနစ်က ကျုပ်တို့နိုင်ငံနဲ့ မသင့်သေးဘူးဆိုတဲ့ဖက်ကရှိကြောင်း….
ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ အချိုးကျ ကိုယ်စားပြု ရွေးကောက်ပွဲစနစ် PR ကို ကျင့်သုံးဖို့အတွက် ဒီနေ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ထဲမှာ အတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။
ပြည်သူ့ အသံ နားစွင့် နေတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကြီးဘဲ လေ။
သူ့ဟာသူ အခုမှ ထပြီး အတည်ပြုနေတာပါ။
တကယ်တော့ နဂိုထဲ က သူ့နည်းသူ့ဟန် အချိုးချ ထိုင်နေကြပြီးသား ကြီး ကိုများ။
ဒါကြောင့် မြင်နေတယ်မျက်လုံးများ ပိုစ့်ကို မနေ့ကရေးဖြစ်ခဲ့တာလေ